Ubani-ke umngane weqiniso?
Kuthiwa wonke umuntu kufanele abe umsebenzi omuhle, umkhaya oqinile futhi umngane weqiniso uyobona ukuthi ubani kuyohlale kukhona. Kodwa nokho kukhona umqondo ogcwele kubantu wokuthi imikhaya ukwenza kulula ukudlula ekutholeni umngane weqiniso. Kungakhathaliseki ukuthi laliyini, kodwa ubungani odlale indima ebalulekile empilweni yomuntu yesimanje. Lapha siya othile babelane nabo ngezimfihlo zokuthola? Futhi ubani bememeza sangaphansi, sitshela ukuthi muva wahlangana uthando impilo yakhe futhi ngaso sonke elahlekile amakhanda abo? Okunye. Futhi ungahlanganyela kanjani umngane weqiniso? Ake sizame ukuthola it out.
Kukholakala ukuthi abangani kungaba kancane, kodwa umngani weqiniso oyedwa kuphela. Kuyiqiniso, ubhekene ngeke ukutshela umngane imfihlo esiseduze Kusinda like umngane, futhi like noma cha. Ukuze uthole umngane weqiniso, kuyodingeka ujuluke. Nakuba kungenzeka ukuba ngimthole. Khona-ke, njengoba inhlanhla kule casino, noma-ke noma akusiyo. Ngokuvamile, laba bangane abathembekile sihlangane ezijulile ngiseyingane, uya nabo esikoleni, thokozani zonke umcimbi, kanye nabantu abadala, qhubeka ukulondoloza ubuhlobo kodwa ngesikhathi esifanayo eduze abantu abaningi emhlabeni. Kodwa lokhu akusho ukuthi ubungane beqiniso ayikwazi ukutholwa empilweni omdala. Ubungane, ezinjengothando, bonke ubudala. Vele bazothi ukuthi umngane weqiniso ngeke kuwele phezu kwekhanda lakho. Kuzothatha iminyaka eminingi kuye ukuze uthole lokhu isimo.
Uma wenza portrait zokuba umngane weqiniso, kumele kube into enjengale:
• Ungashiyi dengwane. Uyolokhu ukusiza, ngisho nalapho anikele amacebo abo noma ngisho nokuphila kwabo.
• Ukwazi ukuthi kulalelwa kanjani. Akalokothi iphazamisa, njalo aphendule imibuzo.
• Inikeza amathiphu smart. Lokhu kusho ukuthi akazange ukweluleka ezingabangela ubungozi, ezifana umonakalo ubudlelwane noma umsebenzi ngothando.
• Umngane weqiniso ngeke ukuhalalisela usuku lokuzalwa noma ezinye ukugubha. Uyokwenza isipho, ngisho ngemvume iposikhadi.
• Wayevame ubiza futhi ucela, unjani.
• Musa akhaphele, musa bamelele alinaso ubungani ukuze bazizuzise bona.
• Uthanda ukuya amabhayisikobho, bese ukhuluma ifilimu isikeni.
Lena kuphela okungenani kuka ungaba umngane wangempela. Ngokuvamile, ubungane beqiniso - kuba umthombo engapheli ngezenzo ezinhle izikhathi ujabule.
Umuntu onalo umngane weqiniso kungenziwa ayefisa ukufana nabo. Ngokuvamile, abantu babe inqwaba nabangane, kuyisifiso nje akababalanga phakathi kwabo, lowo kakhulu-kakhulu. Ngezinye izikhathi kufanele ezishile ezinhle, ngaphandle-ke umngane weqiniso lokho akusoze kwaphumelela.
Kodwa mina kazi kunzima ukuba umngane weqiniso? Khona-ke, njengoba they bheka it. Ngakolunye uhlangothi yebo, ngoba umngane weqiniso uyena umthwalo ubudlelwane namanye amadoda. Angaba ukudela yonke into ngezinjongo siqu sakhe, noma yini, kodwa hhayi ubungani. Cishe, ngakho-ke, kunzima ukuba umngane weqiniso, ngoba ngokuvamile kakhulu ekuphileni Ufaka nathi uma ubhekene nesimo esinjena kufanele enze ukukhetha ezinzima phakathi kobungane nobudlelwane futhi okunye. Uma ubheka ngakolunye uhlangothi, kungani umngane wangempela kufanele kube nzima. Isihloko "wangempela" kuyamfanela akubona bonke, kodwa munye owayefanelwe ukuba babhekane ngokuphumelelayo nazo zonke izilingo kobungane nobudlelwane.
Kumele kuqashelwe ukuthi le kobungane bethu akunqunywa ukuthi okuphakade njalo. Ngezinye izikhathi ngisho bangani labakhulu ulahlekelwe ubuhlobo babo. Vele ube nomuzwa wokuthi kungaphezu ubungani - Uthando lukulokhu. Futhi uma ababili ukuwa uthando nomuntu oyedwa, ubuhlobo babo bangase bakunikeze kahle ufa. Kukholakala ukuthi omunye wabangane bakhe ngaphansi kwezimo ezifanayo kufanele uvume, kodwa ngubani, eqinisweni, kokubili endaweni efanayo. Nokho, uma ibhidliza ubungane bangempela, kodwa akuvamile.
Nokho, kuhle ukuba nabangane bangempela ezimpilweni zethu. umndeni Family, kodwa ubungani eqiniso angelokothe libuhlungu. Uma singase sithole kuphela, samanje kanye nomngane oqotho kakhulu ubani ungalokothi uphonse ithawula futhi akuvumele hhayi phansi.
Amaqiniso ezithakazelisayo kakhulu mayelana intombi. Amaqiniso ethakazelisayo ngumngane omkhulu
Indlela yokwenza ubungani namandla kunomFilisti 13 amathiphu ezilula kodwa eziphumelelayo
Ubuhlobo kaPlato - Iyini?
Indlela yokuthola imibuzo ilungelo abangane amaphrofayli
Umona kanjani ukulwa naso?
Haircuts Amadoda imfashini kunazo sika 2011
Uthando - kulula! (Ingxenye 1)
Ubuthi Rat - noshevu wamagundane
Ukuzikhiya ngokuzenzekelayo kwenza kube nemigwaqo emisha etholakalayo
Kuyini esibukweni ephukile? Yebo, konke okufanayo! Kodwa yini okufanele uyenze ngakho?
Milky ezidliwayo mushroom Lactarius flexuosus
Indlela ukwandisa libido besifazane?